Kedu ihe bụ Google Trends, gịnị kpatara ọ ji dị mkpa na otu o si arụ ọrụ | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | Nkuzi na akuru
Otu n’ime ngwa ọrụ ndị ọkachamara SEO kacha eji eme ihe bụ enweghị Google Trends. Ọ bụ ngwa ọrụ enwere ike iji chọpụta etu "dị mkpa" n'ịchọta okwu (ma ọ bụ okwu), si otú a na-enyere aka ịchọpụta nke nwere ike ịbụ mkpụrụokwu ga-arụ ọrụ kacha mma na atụmatụ azụmaahịa n'ịntanetị (yana itinye ọnọdụ) .
Ma, Kedu ihe bụ Google Trends? Gịnị ka ọ bụ maka? na otu o si aru oru? Taa anyị na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọrụ Google a nke ị nwere ike ọ gaghị ama nke ọma.
1 Kedu ihe bụ Google Trends
2 Kedu ihe eji eme Google?
3 Kedu ihe kpatara iji ngwa a maka eCommerce gị
4 Etu esi eji Google Trends
Oge mbụ anyị matara na Google Trends dị na 2006, mgbe ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ngwá ọrụ ahụ iji soro mgbanwe nke ọchụchọ dabere na isiokwu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ngwa na-enye gị ohere inyocha isiokwu n'ụzọ ga-eme ka ị mara ụdị nyocha ọ nwere ọtụtụ afọ, ọnwa, izu ma ọ bụ ụbọchị.
Enwere ike ịghọta Google Trends dị ka a ngwá ọrụ na-enyocha ewu ewu nke okwu ma ọ bụ okwu iji mara ma ọ bụrụ na ha na-eme ma ọ bụ, na ntụle, na-ada. Na mgbakwunye, ọ na-enyekwa data ndị ọzọ dịka omume igwe mmadụ, ọchụchọ metụtara ya, isiokwu ndị metụtara ya, wdg.
Njirimara Google a zuru oke ma ọ chọghị ndebanye aha mbụ ma ọ bụ jikọta ya na email. Ọtụtụ ndị ọkachamara SEO ma ọ bụ ndị ọkachamara n'ahịa dijitalụ na-eji ya maka ọrụ ha na-arụpụta ezigbo nsonaazụ, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịgwa gị na ọ bụ ihe pụrụ iche, ha na-ejikọta ya na ngwaọrụ ndị ọzọ (yana n'efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ).
Kedu ihe eji eme Google?
Na mbu, mgbe ị bịara na peeji ahụ ma tinye okwu iji chịkwaa, ọ ga-ekwe omume data nke akụrụngwa na-atụ gị nwere ike karịrị gị, mana ọ dị ezigbo mfe nghọta. Ọ bụghị naanị na ị ga - egosi gị omume nke okwu ahụ ị tinyere, mana ọtụtụ karịa. Kpọtụrụ:
Olu nke ọchụchọ. Nke ahụ bụ, otu okwu ahụ si eme omume dabere na ụbọchị ụfọdụ, izu, ọnwa, ma ọ bụ ọbụna afọ ụfọdụ.
Uzo ichoro. Nke a ga - agwa gị ma okwu ị debere na - abawanye ma ọ bụ na - ebelata okporo ụzọ ya. Gịnị bụ ihe a? Ọfọn, iji chọpụta ma ọ bụ okwu nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a ma ọ bụ n'oge dị mkpirikpi (dịka ọmụmaatụ, ụbọchị Valentine. Ọ nwere ike na-abawanye n'etiti Jenụwarị mana, mgbe February 20 gasịrị, ọ ga-adalata ruo mgbe ọ ga-efu maka afọ na-esote ).
Eburu amuma. Akụkụ a nke Google Trends amachaghị nke ọma, mana ọ ga - enyere gị aka ịmata ma isiokwu ahụ nwere ike ịgbanwu (ma ọ bụ ala) n'oge ụfọdụ.
Nnyocha ndị yiri ya. Nke ahụ bụ, mkpụrụ okwu a na-achọkwa metụtara okwu ahụ i tinyere.
Nyocha ọchụchọ. Ngwaọrụ a ga - enye gị ohere ịchọ site na mpaghara ebe, otu, ụbọchị ...
Kedu ihe kpatara iji ngwa a maka eCommerce gị
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọbụlagodi mgbe ịnweghị usoro ịzụ ahịa, Google Trends dị mkpa maka ụbọchị gị kwa ụbọchị. Na, agbanyeghị na ị gaghị ekwenye na ya, ọ ga - enyere gị aka ịmata ihe ọhụụ ọhụrụ, ihe ndị ọrụ na - achọkarị, wdg. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nwere ike enyere gị aka ịchọpụta ngwaahịa ndị ga-aga nke ọma na eCommerce gị.
Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị nwere ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ ma ọ pụta na na Google Trends akpụkpọ ụkwụ nke otu akara na-ebili dị ka ụfụfụ. You nwere ha maka ọrịre ma dị ọnụ ala karịa ndị asọmpi gị. Ọfọn, iji ohere ahụ na itinye obere ego n'ịkwalite ngwaahịa ahụ pụrụ ime ka nleta na ire ahịa gị gbagoro n'ihi na ị na-enye ihe ndị mmadụ na-achọ.
Ọ na-enyere gị aka ebuli faịlụ gị. Ma ọ bụ na iji mkpụrụokwu kachasị emetụ ị ga-enwe ike ịkọwapụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ngwaahịa ọ bụla ka Google crawlers tinye gị ka mma (ọtụtụ amabeghị na itinye ederede mbụ na nke pụrụ iche na kaadị dị mma karịa ịmeghachi otu ihe ahụ ndị ọzọ niile).
Etu esi eji Google Trends
Ma ugbu a, anyị na-aga bara uru, ịmara otu ngwa ọrụ si arụ ọrụ. Iji mee nke a, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga na ngwa Google Trends. Site na ndabara, na aka nri aka nri, ọ kwesịrị itinye Spain dị ka mba (ọ bụrụ na ịnọ na Spen) mana ị nwere ike ịgbanwe mba ahụ ebe ị nọ.
Na ihuenyo mbụ ị ga-ahụ Kedu ka esi gosipụta ụfọdụ ihe atụ mana kpachara anya, ha abụghị data sitere na Spain, ma site na United States ma ọ bụ n'ụwa niile, nke ha nwere ike ọ gaghị enyere gị aka.
Ọ bụrụ na ị gbadaa ntakịrị, ị ga-amata ihe ndị ụwa na-eme n'oge na-adịbeghị anya na, n'okpuru, ọchụchọ ahụ site na afọ (ị nwere ike ịchọta okwu maka Spain ebe a).
Ga-ahụ na e nwekwara igbe ọchụchọ. Nke ahụ bụ ebe ị kwesịrị itinye okwu ọchụchọ ma ọ bụ isiokwu. Iji maa atụ, eCommerce. See na-etokwa iko (ma ọ bụ Tinye) na ọ ga-ewe gị na-arụpụta na peeji nke.
Nsonaazụ nsonaazụ gosiri gị ọtụtụ ihe. Mana ihe anyị na-atụle kacha mkpa bụ:
Mba. Ọ ga - etinye Spain, mana ị nwekwara ike ịgbanwe ya maka obodo masịrị gị.
Monthsbọchị iri na abụọ gara aga. Site na ndabara oge a na-apụta mgbe niile, na nyocha mbụ, mana ị nwere ike ịgbanwe ya maka ọtụtụ nhọrọ: site na 2004 ruo taa, n'ime afọ ise gara aga, ụbọchị 90 gara aga, ụbọchị 30 gara aga, ụbọchị ikpeazụ 7, ụbọchị ikpeazụ, ikpeazụ 4 awa, ikpeazụ nkeji.
Ngalaba niile. Ọ na-enye gị ohere, ọkachasị maka okwu ma ọ bụ okwu nwere ike ịnwe ọtụtụ echiche, chọpụta nchọta ziri ezi.
Nchọta webụ. Site na ndabara ị ga-enwe nke a, mana ị nwekwara ike chọọ site na oyiyi, akụkọ, newszụ ahịa Google (zuru oke maka eCommerce) ma ọ bụ YouTube.
N'okpuru n'okpuru, ị ga-enwe eserese ga-agbanwe ka ị gbanwee data gara aga.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, isiokwu gị pụtara na elu, mana ọ bụrụ na i lee anya nke ọma, enwere kọlụm na-ekwu "tụlee". A na-eji nke a tinye isiokwu ọzọ na-amasị gị ebe ahụ na ịmata onye nke abụọ siri ike, ma ọ bụ nwee nyocha ọzọ.
Mgbe ahụ ọ pụtara gị mmasị nke okwu a nwere na mba, n'ụzọ dị otú a na ha ga-agwa gị obodo ndị kwụ ọtọ bụ ndị na-achọ okwu a kachasị (nke a dị mma ịmara, maka obodo gị ma ọ bụ obodo gị, ihe kachasị amasị gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na eCommerce gị karịa mpaghara).
N'ikpeazụ, ị nwere ogidi abụọ. Otu bụ nke isiokwu ndị metụtara ya, oro edi, mme ikọ m̀m or mme ikọ oro ẹkemede ndidi ukem ye ikọ emi afo okoyomde; n'aka nke ọzọ, inwere ajụjụ gbara ajụjụ, nke ahụ bụ, mkpụrụokwu ndị ọzọ metụtara nke ịchọrọ na nke ahụ nwere ike ịbụ nhọrọ ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Kedu ihe bụ Google Trends
Esi zipu ngwugwu